အရေးအကြောင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေစနိုင်တဲ့ ပျိုမေတို့ သတိမထားမိသော အလေ့အထလေးများ - Myannewsmedia
အရေးအကြောင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေစနိုင်တဲ့ ပျိုမေတို့ သတိမထားမိသော အလေ့အထလေးများ
မိန်းကလေးတိုင်းက ကိုယ့်အသားအရေလေး နူးညံချောမွတ်နေမှ စိတ်ချမ်းသာကြပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတာကို ဘယ်သူမှ မလိုချင်ကြပါဘူးနော်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ skincare တွေကို ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ဝယ်သုံးကြရပါတယ်။
တစ်ခါတရံမှာ ဈေးကြီးတဲ့ skincare တွေသုံးပေမယ့်လည်း ရလဒ်က သိသိသာသာ ထူးခြားမလာတာကို ကြုံရပါတယ်။ ဒါက အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ အားပေးနေတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကျ အပြုအမှုတွေ၊ အလေ့အထတွေနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ အလှအပကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုကြပါတယ်။ ဘယ်လို အလေ့အထတွေက အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်လာစေတာလဲ?
၁။ မျက်နှာကို မကြာခဏ သစ်ခြင်း
အထူးသဖြင့် သင်ဟာ အဆီပြန်တဲ့သူ (သို့) ဝက်ခြံပေါက်နေတဲ့ ပေါင်းစပ်အသားအရေရှိသူဖြစ်လျှင် မျက်နှာအသားအရေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားတာက ကောင်းပါတယ်။
အလှအပကျွမ်းကျင်သူများက တစ်ပတ်ကို ၂ကြိမ်ထက်ပိုပြီး peel-off scrub ကို အသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာကို လိုးရှင်းသို့မဟုတ် tonic water နှင့် နေ့စဉ် မသန့်ရှင်းသင့်ပါဘူး။ ဒီအရာတွေက အသားအရေကို အရမ်းခြောက်သွေ့စေပြီး အရေပြားရဲ့ ခုခံစွမ်းအားကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
၂။ ခေါင်းအုံးနှင့် မျက်နှာအပ်ပြီး အိပ်ခြင်း
လူအတော်များများက မှောက်ခုံအိပ်ရတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်ခြင်းဖြင့် အရေပြားဟာ ညဘက်မှာ အောက်ဆီဂျင် ဆုံးရှုံးပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို အတားအဆီးဖြစ်စေတာကြောင့် အသားအရေပျက်စီးစေပါတယ်။
ဒီလိုအန္တရာယ်ကို လျော့ချဖို့ တခြားအိပ်စက်ပုံအနေအထားကို ရွေးချယ်ပါ။ အကောင်းဆုံးက ခေါင်းအုံးတစ်လုံးအစား ဂငယ်ပုံစံ ကူရှင်အသေးတစ်ခုနှင့် ပက်လက်အိပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက သင့်အရေပြားကို အချိန်ကြာကြာ နူးညံ့ချောမွေ့နေစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သင့်လည်ပင်းကို အရမ်းကြီး တင်းကျပ်မနေစေတာကြောင့် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေး ရှားတာကြောင့် ဒါက ရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ နီကိုတင်းနှင့် ကတ္တရာစေးက အသားအရေကို ခြောက်သွ့စေတာကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အရေးအကြောင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး မျက်နှာပေါ်မှာ cosmetics ထူထူကြီး လိမ်းချယ်ခြင်းဟာ အသားအရေကို အောက်ဆီဂျင်ရယူခြင်းမှ တားဆီးပေးပါတယ်။ အလှအပကျွမ်းကျင်သူများက နေ့အချိန်မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ ခရမ်ပါးပါးလိမ်းပြီး အောက်ခံမိတ်ကပ်လိမ်းဖို့၊ ပြီးမှ ပေါင်ဒါပါးပါးလေးလူးဖို့ နှင့် ညနေခင်းမှာတော့ မိတ်ကပ်အားလုံးဖျက်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
အသားအရေမတွန့်ဖို့အတွက် cosmeticsတွေကို မှန်အောင်လိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မအိပ်ခင် မျက်နှာကို သေသေချာချာ သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ စခရမ်ရှေ့မှာ အချိန်ကုန်ခြင်း
ကျွန်မတို့ဟာ တစ်နေ့တစ်န့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ၊ လက်တော့စခရမ်တွေ ရှေ့မှာ အချိန်အများကြီး သုံးနေကြပါတယ်။ ဒီစမတ်ပစ္စည်းတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းနဲ့ မေးစေ့က အရေးအကြောင်းတွေ စတင်ပေါ်ဖို့ နယ်နိမိတ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် လည်ပင်းဟာ ပျက်စီးမှုကို သတိပြုမိတဲ့ ပထမဆုံး ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန် မျက်နှာလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင့်သလို မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းကို နှိပ်နယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မေးစေ့လိုင်းနဲ့ လည်ပင်းအကြား အရေးအကြောင်းတွေ မဖြစ်အောင် စားပွဲမှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မတ်မတ်ဖြစ်နေရပါမယ်။
၆။ အပူပေးစက်နားမှာ ထိုင်ခြင်း
အေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ အပူပေးကိရိယာတွေက ကျွန်မတို့ အလှအပရဲ့ ရန်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့က အသားအရေနှင့် ဆံကေသာကို ခြောက်သွ့စေပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်၊
ရေများများသောက်ပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းခရမ်လိမ်းတာက ဒီအခြေအနေကို ကုစားဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ အဆီလွတ် diet
အဆီတွေက ကျွန်မတို့အသားအရေအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။ သူတို့မရှိရင် အသားအရေဟာ ခြောက်သွေ့ပြီး စိုစိုပြေပြေမရှိတော့ပါဘူး။
ငါး၊ အခွံမာသီးနဲ့ သံလွင်ဆီမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အလုံးစုံကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် အသားအရေရဲ့ အခြေအနေအတွက် တာဝန်ရှိသော ဖက်တီးအက်ဆစ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့က အသားအရေခြောက်သွေ့တာကို တားဆီးပေးပြီး ဗီတာမင်နှင့် တခြားအာဟာရဓါတ်တွေကို လက်ခံပေးပါတယ်။
ရေပူနှင့် အချိန်ကြာကြာချိုးခြင်းက တစ်နေ့တာအလုပ်ပြီးနောက် အနားယူဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစေတာက ရေပူဟာ အရေးအကြောင်းနှင့် အရေပြားပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေပူက အသားအရေ၏ သဘာဝအဆီကို ဆုံးရှုံးစေပြီး အချိန်မတိုင်မီ အိုမင်းစေတဲ့ ၎င်းရဲ့ အကာအကွယ်ဂုဏ်သတ္တိတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
အကောင်းဆုံးက ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက်မကျော်တဲ့ ရေအပူချိန်နှင့် ရေချိုးပါ။ သင့်မှာ သွေးကြော အားနည်းမှုရှိပါက ရေအေးဖြင့် အပြီးသတ်ချိုးပေးတာက balance ဖြစ်စေပြီး သင့်အရေပြားကို အားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
၉။ မျက်လုံးအားနည်းပေမယ့် မျက်မှန်မတပ်တာ
အမြင်အာရုံမကောင်းတဲ့သူဟာ အချိန်တိုင်း မျက်မှောက်ကြုတ်ပြီးကြည့်ရပါတယ်။ ဒီဆိုးကျိုးက မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ အသားအရေကို လျော့ရဲစေပြီး အရေးအကြောင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မျက်ကပ်မှန် သို့မဟုတ် မျက်မှန်သုံးဖို့ သတိရပါ။
၁၀။ ဝက်ခြံ ညှစ်တာ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်မတို့ဟာ မလုပ်သင့်တာကို သိပေမယ့် လုပ်မိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဝက်ခြံညှစ်တဲ့အခါ ရောင်ရမ်းစေခြင်းအပြင် အသားအရေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အမာရွတ်နှင့် ဝက်ခြံပေါက်တဲ့နေရာမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ခေါင်းအုံးစွပ် မလဲတာ
ခေါင်းအုံးတစ်လုံးက သင့်အသားအရေအတွက် အန္တရာယ်၏ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်တွေ၊ ဆံပင်လိမ်းဆီတွေက ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့နိုင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားမျိုးစုံ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်နေစဉ်အတွင်း ဒီအရာအားလုံးက သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ဆံပင်အလှကုန်ပစ္စည်းများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတုဒြပ်စင်များက အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ခေါင်းအုံးစွပ်ကို ၂ရက် ၃ရက်တစ်ခါ ပြောင်းပစ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၁၂။ ပီကေ အဆက်မပြတ်ဝါးတာ
ပီကေ အဆက်မပြတ် ဝါးတဲ့ အကျင့်ဟာ သင့်အလှအပအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ပီကေဝါးတဲ့အခါ အရေပြားဟာ ဆန့်ရ၊ ကျုံ့ရတာကြောင့် ပါးစပ်တဝိုက်မှာ အရေးအကြောင်းတွေကို စောစောစီးစီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သကြားလုံးနှင့် ပီကေကို အစားထိုးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၁၃။ SPF creams မလိမ်းတာ
နေရောင်ခြည်က အသားအရေကို အချိန်မတိုင်ခင် အိုမင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကမ်းခြေသွားတဲ့အချိန်မှသာမဟုတ်ဘဲ နေ့တိုင်း နေရောင်ကာကွယ်ဆေး သုံးဖို့လိုပါတယ်။
မှန်မှတဆင့်လာတဲ့ နေရောင်ခြည်ကလည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခရီးသွားလို့ ကားစီးတဲ့အခါ လက်၊ လည်ပင်းနှင့် မျက်နှာပေါ်မှာ ဗီတာမင်စီပါဝင်သော နေရာင်ကာလိမ်းဆေးကို လိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်လိုပဲ အရေးအကြောင်းကင်းပြီး အသားအရေ တင်းတင်းလေးနှင့် လှနိုင်ဖို့ ချစ်တဲ့သယ်ရင်းတွေကို မျှဝေပေးပါဦးနော်။
မိနျးကလေးတိုငျးက ကိုယျ့အသားအရလေေး နူးညံခြောမှတျနမှေ စိတျခမျြးသာကွပါတယျ။ အရှယျမတိုငျခငျ မကျြနှာမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ပျေါလာတာကို ဘယျသူမှ မလိုခငျြကွပါဘူးနျော။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျမတို့ မိနျးကလေးတှဟော skincare တှကေို စြေးကွီးကွီးပေးပွီး ဝယျသုံးကွရပါတယျ။
တဈခါတရံမှာ စြေးကွီးတဲ့ skincare တှသေုံးပမေယျ့လညျး ရလဒျက သိသိသာသာ ထူးခွားမလာတာကို ကွုံရပါတယျ။ ဒါက အရေးအကွောငျးတှေ ဖွဈလာစဖေို့ အားပေးနတေဲ့ ကြှနျမတို့ရဲ့ နစေ့ဉျပွုလုပျနကြေ အပွုအမှုတှေ၊ အလအေ့ထတှနှေငျ့လညျး သကျဆိုငျနတေယျလို့ အလှအပကြှမျးကငျြသူမြားက ဆိုကွပါတယျ။ ဘယျလို အလအေ့ထတှကေ အရေးအကွောငျးတှေ ဖွဈလာစတောလဲ?
၁။ မကျြနှာကို မကွာခဏ သဈခွငျး
အထူးသဖွငျ့ သငျဟာ အဆီပွနျတဲ့သူ (သို့) ဝကျခွံပေါကျနတေဲ့ ပေါငျးစပျအသားအရရှေိသူဖွဈလြှငျ မကျြနှာအသားအရကေို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ထားတာက ကောငျးပါတယျ။
အလှအပကြှမျးကငျြသူမြားက တဈပတျကို ၂ကွိမျထကျပိုပွီး peel-off scrub ကို အသုံးမပွုသငျ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မကျြနှာကို လိုးရှငျးသို့မဟုတျ tonic water နှငျ့ နစေ့ဉျ မသနျ့ရှငျးသငျ့ပါဘူး။ ဒီအရာတှကေ အသားအရကေို အရမျးခွောကျသှစေ့ပွေီး အရပွေားရဲ့ ခုခံစှမျးအားကို လြော့နညျးစပေါတယျ။
၂။ ခေါငျးအုံးနှငျ့ မကျြနှာအပျပွီး အိပျခွငျး
လူအတျောမြားမြားက မှောကျခုံအိပျရတာကို ကွိုကျကွပါတယျ။ ဒီလိုအိပျခွငျးဖွငျ့ အရပွေားဟာ ညဘကျမှာ အောကျဆီဂငျြ ဆုံးရှုံးပွီး ပုံမှနျလညျပတျမှုကို အတားအဆီးဖွဈစတောကွောငျ့ အသားအရပေကျြစီးစပေါတယျ။
ဒီလိုအန်တရာယျကို လြော့ခဖြို့ တခွားအိပျစကျပုံအနအေထားကို ရှေးခယျြပါ။ အကောငျးဆုံးက ခေါငျးအုံးတဈလုံးအစား ဂငယျပုံစံ ကူရှငျအသေးတဈခုနှငျ့ ပကျလကျအိပျသငျ့ပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးက သငျ့အရပွေားကို အခြိနျကွာကွာ နူးညံ့ခြောမှနေ့စေမှောပါ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့လညျပငျးကို အရမျးကွီး တငျးကပျြမနစေတောကွောငျ့ ကောငျးကောငျးအိပျပြျောစပေါတယျ။
ဆေးလိပျသောကျတတျတဲ့ မိနျးကလေး ရှားတာကွောငျ့ ဒါက ရှငျးပွဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ နီကိုတငျးနှငျ့ ကတ်တရာစေးက အသားအရကေို ခွောကျသှ့စတောကွောငျ့ ဆေးလိပျသောကျခွငျးက အရေးအကွောငျးတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
တဈနလေုံ့း မကျြနှာပျေါမှာ cosmetics ထူထူကွီး လိမျးခယျြခွငျးဟာ အသားအရကေို အောကျဆီဂငျြရယူခွငျးမှ တားဆီးပေးပါတယျ။ အလှအပကြှမျးကငျြသူမြားက နအေ့ခြိနျမိတျကပျလိမျးတဲ့အခါ ခရမျပါးပါးလိမျးပွီး အောကျခံမိတျကပျလိမျးဖို့၊ ပွီးမှ ပေါငျဒါပါးပါးလေးလူးဖို့ နှငျ့ ညနခေငျးမှာတော့ မိတျကပျအားလုံးဖကျြဖို့ အကွံပွုထားပါတယျ။
အသားအရမေတှနျ့ဖို့အတှကျ cosmeticsတှကေို မှနျအောငျလိမျးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မအိပျခငျ မကျြနှာကို သသေခြောခြာ သနျ့ရှငျးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၅။ စခရမျရှမှေ့ာ အခြိနျကုနျခွငျး
ကြှနျမတို့ဟာ တဈနတေ့ဈန့ မိုဘိုငျးဖုနျးတှေ၊ လကျတော့စခရမျတှေ ရှမှေ့ာ အခြိနျအမြားကွီး သုံးနကွေပါတယျ။ ဒီစမတျပစ်စညျးတှကေ ကြှနျမတို့ရဲ့ အသားအရကေို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ လညျပငျးနဲ့ မေးစကေ့ အရေးအကွောငျးတှေ စတငျပျေါဖို့ နယျနိမိတျတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ လညျပငျးဟာ ပကျြစီးမှုကို သတိပွုမိတဲ့ ပထမဆုံး ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးဖွဈပါတယျ။
ပုံမှနျ မကျြနှာလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျသငျ့သလို မကျြနှာနှငျ့လညျပငျးကို နှိပျနယျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မေးစလေို့ငျးနဲ့ လညျပငျးအကွား အရေးအကွောငျးတှေ မဖွဈအောငျ စားပှဲမှာ အလုပျလုပျနစေဉျ ခန်ဓာကိုယျဟာ မတျမတျဖွဈနရေပါမယျ။
၆။ အပူပေးစကျနားမှာ ထိုငျခွငျး
အေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ အပူပေးကိရိယာတှကေ ကြှနျမတို့ အလှအပရဲ့ ရနျသူမြား ဖွဈကွပါတယျ။သူတို့က အသားအရနှေငျ့ ဆံကသောကို ခွောကျသှ့စပွေီး အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ၊
ရမြေားမြားသောကျပွီး အစိုဓါတျထိနျးခရမျလိမျးတာက ဒီအခွအေနကေို ကုစားဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
၇။ အဆီလှတျ diet
အဆီတှကေ ကြှနျမတို့အသားအရအေတှကျ အလှနျအရေးပါပါတယျ။ သူတို့မရှိရငျ အသားအရဟော ခွောကျသှပွေီ့း စိုစိုပွပွေမေရှိတော့ပါဘူး။
ငါး၊ အခှံမာသီးနဲ့ သံလှငျဆီမှာ ကြှနျမတို့ရဲ့ အလုံးစုံကနျြးမာရေးအခွအေနနှေငျ့ အသားအရရေဲ့ အခွအေနအေတှကျ တာဝနျရှိသော ဖကျတီးအကျဆဈမြား ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့က အသားအရခွေောကျသှတေ့ာကို တားဆီးပေးပွီး ဗီတာမငျနှငျ့ တခွားအာဟာရဓါတျတှကေို လကျခံပေးပါတယျ။
ရပေူနှငျ့ အခြိနျကွာကွာခြိုးခွငျးက တဈနတေ့ာအလုပျပွီးနောကျ အနားယူဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ ကံမကောငျးစတောက ရပေူဟာ အရေးအကွောငျးနှငျ့ အရပွေားပွဿနာတှကေို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ရပေူက အသားအရေ၏ သဘာဝအဆီကို ဆုံးရှုံးစပွေီး အခြိနျမတိုငျမီ အိုမငျးစတေဲ့ ၎င်းငျးရဲ့ အကာအကှယျဂုဏျသတ်တိတှကေို လြော့နညျးစပေါတယျ။
အကောငျးဆုံးက ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျထကျမကြျောတဲ့ ရအေပူခြိနျနှငျ့ ရခြေိုးပါ။ သငျ့မှာ သှေးကွော အားနညျးမှုရှိပါက ရအေေးဖွငျ့ အပွီးသတျခြိုးပေးတာက balance ဖွဈစပွေီး သငျ့အရပွေားကို အားကောငျးစနေိုငျပါတယျ။
၉။ မကျြလုံးအားနညျးပမေယျ့ မကျြမှနျမတပျတာ
အမွငျအာရုံမကောငျးတဲ့သူဟာ အခြိနျတိုငျး မကျြမှောကျကွုတျပွီးကွညျ့ရပါတယျ။ ဒီဆိုးကြိုးက မကျြလုံးတဈဝိုကျမှာရှိတဲ့ အသားအရကေို လြော့ရဲစပွေီး အရေးအကွောငျးတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ကှနျပြူတာရှမှေ့ာ အလုပျလုပျတဲ့အခါ မကျြကပျမှနျ သို့မဟုတျ မကျြမှနျသုံးဖို့ သတိရပါ။
၁၀။ ဝကျခွံ ညှဈတာ
တဈခါတဈရံမှာ ကြှနျမတို့ဟာ မလုပျသငျ့တာကို သိပမေယျ့ လုပျမိနတေတျကွပါတယျ။ ဝကျခွံညှဈတဲ့အခါ ရောငျရမျးစခွေငျးအပွငျ အသားအရကေို ထိခိုကျစပေါတယျ။ အမာရှတျနှငျ့ ဝကျခွံပေါကျတဲ့နရောမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ကနျြခဲ့နိုငျပါတယျ။
၁၁။ ခေါငျးအုံးစှပျ မလဲတာ
ခေါငျးအုံးတဈလုံးက သငျ့အသားအရအေတှကျ အန်တရာယျ၏ အရငျးအမွဈတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ မိတျကပျတှေ၊ ဆံပငျလိမျးဆီတှကေ ခေါငျးအုံးပျေါမှာ ကနျြခဲ့နိုငျပွီး ဘကျတီးရီးယားမြိုးစုံ ရှိနနေိုငျပါတယျ။ အိပျနစေဉျအတှငျး ဒီအရာအားလုံးက သငျ့မကျြနှာပျေါမှာ ရောကျရှိနိုငျပွီး ဆံပငျအလှကုနျပစ်စညျးမြားမှာ ပါဝငျတဲ့ ဓါတုဒွပျစငျမြားက အရှယျမတိုငျမီ အိုမငျးစနေိုငျပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ခေါငျးအုံးစှပျကို ၂ရကျ ၃ရကျတဈခါ ပွောငျးပဈတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၁၂။ ပီကေ အဆကျမပွတျဝါးတာ
ပီကေ အဆကျမပွတျ ဝါးတဲ့ အကငျြ့ဟာ သငျ့အလှအပအတှကျ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ ပီကဝေါးတဲ့အခါ အရပွေားဟာ ဆနျ့ရ၊ ကြုံ့ရတာကွောငျ့ ပါးစပျတဝိုကျမှာ အရေးအကွောငျးတှကေို စောစောစီးစီး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သကွားလုံးနှငျ့ ပီကကေို အစားထိုးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၁၃။ SPF creams မလိမျးတာ
နရေောငျခွညျက အသားအရကေို အခြိနျမတိုငျခငျ အိုမငျးစနေိုငျပါတယျ။ ကမျးခွသှေားတဲ့အခြိနျမှသာမဟုတျဘဲ နတေို့ငျး နရေောငျကာကှယျဆေး သုံးဖို့လိုပါတယျ။
မှနျမှတဆငျ့လာတဲ့ နရေောငျခွညျကလညျး အန်တရာယျရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခရီးသှားလို့ ကားစီးတဲ့အခါ လကျ၊ လညျပငျးနှငျ့ မကျြနှာပျေါမှာ ဗီတာမငျစီပါဝငျသော နရောငျကာလိမျးဆေးကို လိမျးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ကိုယျ့လိုပဲ အရေးအကွောငျးကငျးပွီး အသားအရေ တငျးတငျးလေးနှငျ့ လှနိုငျဖို့ ခဈြတဲ့သယျရငျးတှကေို မြှဝပေေးပါဦးနျော။
Previous post နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နိုင်စေဖို့အတွက် သဘာဝဆေးနည်း
Next post ဇင်ရော်မာင်မောင်ရဲ့ “မကြာခင်ယောကျာ်းရပါစေ” ဆုတောင်းစကားကြောင့် အရှက်ပိုခဲ့ရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်